बढ्दै निपाह जोखिम, सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह – Online Kendra
बढ्दै निपाह जोखिम, सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०७:४८ September 14, 2021
भदौ २९, काठमाडौं । भारतमा निपाह भाइरसको सङ्क्रमण देखिन थालेपछि नेपालमा पनि सचेत रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले भारतमा यस प्रकारको भाइरसको सङ्क्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भएकोले सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भारतसँग खुला सिमा भएकाले यहाँ पनि फैलिनसक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको बताए । भारतको केरला राज्यमा केही दिनदेखि एनआईभी भनिने निपाह भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलका अनुसार उक्त भाइरसबाट ४५ देखि ७५ प्रतिशत मानिसमा मृत्यु हुने जोखिम रहेको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले निपाह भाइरसबाट सर्ने रोगलाई विश्वको १० प्राणघातक रोगमध्ये एक मानेको छ । उनले रोगको लक्षण देखिएमा उपचार गरिने बताए । सङ्क्रमणको लक्षण देखिनासाथ नजिकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
के हो निपाहा भाइरस ?
निपाह भाइरसको सङ्क्रमण पहिलो पटक सन् १९९९ मा सिङ्गापुर र मलेसियामा पहिचान भएको थियो । त्यसपछि २१ मे २०१८ मा दक्षिण भारतीय राज्य केरलामा देखिएको थियो ।
त्यही फ्रुट ब्याट भाइरस पशुपन्छी तथा फलफूलको माध्यमबाट निपाह भाइरस सर्ने जोखिम हुने सरुवारोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
निपाह भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । निपाह भाइरस भएका बिरामीको स्याहार सम्भार तथा हेरचाह गरेपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात सफा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बङ्गुर तथा सुँगुरको नजिक जाँदा सचेत हुने, चमेराले जुठो हालेका फलफूल नखाने, फलफूल राम्रोसँग पखालेर मात्रै खाने, गाईवस्तुको गोठ र फार्म सफा राख्ने, मासु काट्दा र पकाउँदा पञ्जा र मास्कको प्रयोग गर्ने, सकेसम्म पानी उमालेर मात्रै पिउने, बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने, भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने गर्नुपर्छ । यदि निपाहा भाइरसको लक्षणको जस्तो देखिएमा सङ्क्रमण भएको हो कि होइन भनेर प्रयोगशालामा पीसीआर वा एलैजा विधिको प्रयोग गरेर रगत, पिसाब, नाक, कान र घाँटीको परीक्षण गराउने गर्नुपर्छ ।
Top Headline, शिक्षा/स्वास्थ्य, समाजनिपाह भाइरस
एभर्टनले बर्नलीलाई हरायो
२ आश्विन २०७८, शनिबार ०४:०२ Bhim Bishokarma 0
असोज २, काठमाडौं । वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको नाममा गरिने इन्द्रजात्राको इन्द्रध्वजोत्थान शनिबार बिहान गरिएको...